Archive du 20170112
Zandarimariam-pirenena Manomboka misavorovoro
Tsy milamina intsony ny mpitandro ny filaminana eto amintsika. Saika ho isan�andro ny fifamonoana etsy sy eroa, toy ny niseho tany Anjozorobe ny herinandro lasa teo, izay nahafatesana zandary iray voalaza ho mpiambina ny jeneraly iray malaza tamin�ny andron�ny tetezamita.
Atallah B�atrice Hatao minisitry ny Atitany
Fanovana governemanta. Any izany izao no ambetin-dresaka taorian�iny Asaramanitra teny Iavoloha tamin�ny 6 janoary 2017 iny.
Fifidianana filoham-pirenena 2018 Tsy tompon-tsafidy ny Malagasy
Tsy mbola misy tokotaniny ny resaka fanomanana ny fifidianana eto amintsika. Na misy aza ny fanisana mpifidy ataon�ny Vaomiera Mahaleotena momba ny fifidianana na ny CENI nanomboka ny 1 desambra 2016 ka hatramin�ny 31 janoary 2017,
Hajo Andrianainarivelo Manao sarin�ady amin�ny HVM
Miketrika mafy ny hidirana ao anaty fitondrana amin�ny alalan�ny fakana ny toeran�ny mpanohitra eny anivon�ny Antenimieram-pirenena i Hajo Andrianainarivelo, filoha nasionalin�ny antoko Malagasy Miara-miainga na ny MMM.
Didier Ratsiraka Nirary soa ny firenena
Ho ela velona anie i Madagasikara ! Io no namaranan�ny filoham-pirenena teo aloha, Didier Ratsiraka, ny teniny raha namehy ny firariantsoan�ireo mpikatroka Arema tonga niarahaba sy nirary soa azy noho ny fahatrarana ny taona vaovao tetsy amin�ny trano fonenany etsy Faravohitra omaly.
Volan�ny CLD Mifanaratsy ireo mpitondra any Alaotra
Misamboaravoara ny raharaha mahakasika ny fampiasana ilay vola 200 tapitrisa Ariary avy amin�ny fitondram-panjakana ho an�ny Distrika hisahanana asa fampandrosoana ifotony eny anivon�ny kaominina tantanin�ny CLD na Komity fampandrosoana ifotony.
Kaominina Ivato Ho vita afaka tapa-bolana ilay Tranompokonolona efa nirodana
Mihazakazaka ny asa fanamboarana fotodrafitrasa entina hanamaivanana ny fahasahiranan�ny mponina amin�ny fiainana andavanandro ho an�ny kaominina Ivato.
Manao ahoana ry Jean a! Fa aiza ianareo amin�izao fotoana izao no toa tsy hita mihitsy sa nisitri-belona e ? Sa kosa mbola mitohy ny vakansy ? Hitanareo sy renareo ihany ve ry Jean ny kaikainay amin�ity delestazy lava tsy misy fiafarany eto amin�ny tan�na ity a ?
Fanambaram-pananana 2017 Nisantatra azy ireo mpikamban�ny CENI
Nanao rodobe teny amin�ny Fitsarana avo momba ny lalampanorenana nanao fanambaram-pananana ho an�ity taona 2017, omaly,
Taksibe Antananarivo Tsy hiakatra ny sarandalana
Tsy hampakatra ny sarandalana aloha ato ho ato ny Fivondronamben�ny kaoperativa mpitatitra eto Iarivo (UCTU), fa mbola miandry ny fampanantenana nataon�ny fanjakana ny amin�ny hanomezana fanampiana 12 miliara Ariary ny mpitatitra,
Sekoly miorina tsy ara-dal�na Hentitra ny fanaraha-maso ataon�ny Cisco
Tsy mitsaha-mitombo amin�izao fotoana izao ireo sekoly tsy miankina vao misokatra nefa tsy manara-penitra.
Soanierana Fokontany III I Mpibodo tany ireo olona nesorina
Taorian�ny vaovao niely mikasika ny fandravana trano tetsy amin�ny fokontany Soanierana III I dia nivoaka tamin�ny fahanginana ny orinasa malagasy SEIM izay tompon�ny tany.
Fikambanan�ny Lahy samy lahy mifankatia 800 no isan�ny mpikambana
Efa tafakatra 800 isa ankehitriny, mivondrona anatina fikambanana miisa 14 ireo olona mitovy taovam-pananahana miaraka sy mifankatia eto amintsika, raha araka ny fanadihadiana natao.